Ungangisiza ngithole ama-backlink aphezulu e-PR athengiswa?
Ngiyaqaphela ukuthi akulula nhlobo ukuthola indawo efanele nokuphephile enikeza ama-backlink high PR okudayiswa. Futhi-ke, cishe akunakwenzeka ukwakha i-backlink eyanele nge-Domain Authority ephezulu, ikhasi le-PageRank, ne-Authority Authority - ngendlela engokwemvelo, ngaphandle kwamadili akhokhelwayo. Kulungile, usebenzisa imithombo nje esemthethweni ukuthola ama-backlink aphezulu akhomba amakhasi wewebhu wesayithi lakho noma ibhulogi. Futhi nginesiqephu sezindawo ukuze uthole i-backlink ephezulu ye-PR - ngethemba lokuthi kunengozi encane engenzeka ukuzitholela isijeziso se-Google.
Izindawo ezifanele nephezulu PR Izindlalelo ezithengiswayo
Asikho isidingo sokuchitha isikhathi sakho sinikeza leso sikhumbuzo esibucayi - noma yisiphi isenzo esihilela izixhumanisi ezikhokhelwayo ze-SEO kube umzamo onzima kakhulu - gratis anti spam software. Yingakho ngenzansi ngizokukhombisa ezinye izindawo ezisekelwe-ezenzelwe futhi eziphephile kunalokho. Uma unesibindi ngokwanele (noma unganandaba - ubani owaziyo?), Nansi lapho unganika khona isikhalazo ku-SEO yakho - okungenani ngaphandle kokuphakamisa ifulegi elibomvu ne-Google ngokushesha.
Ukuphathwa kwezixhumanisi - le nsizakalo inganconywa njengendlela engcono kakhulu yokuzama ukuqala ngokuthola ama-backlink akhokhelwayo wekhwalithi ebonakalayo yemvelo ukuthuthukisa i-SEO yakho esikalini. Ungathola lapho ukutholakala okubanzi kwezixhumanisi ezahlukene nge-DA, PA, nase-PageRank izikolo eziningi. Qaphela, kunikezwe ukuthi isabelomali sakho sinzima kakhulu, lokhu kukhetho kuyoba yisinqumo sakho esingcono kakhulu - ngokunikela ngamathegi wamanani ashibhile phakathi kwazo zonke ezinye izindawo ezisebenzisiwe-ezibhekene nama-backlink high PR athengiswayo.
I-Black Hat Links - yindawo yesibili engcono yokuthenga ama-backlink amabili noma ngisho nesethi enkulu ezayo ngobuningi intengo. Kodwa ngincoma ngokucabangela lo mthombo wesikhungo sokukhokha esikhokhelwayo nje uma usulungele ukuthenga okungenani izixhumanisi ezingu-50-60. Futhi isici esikhethekile sale ndawo yilapho cishe yonke i-backlink ongayithenga khona ifika ne-DoFollow imfanelo etholakalayo.
i-Fiverr - naphezu kwalesi sayithi eyaziwa kakhulu phakathi kokumaketha kwedijithali nemiphakathi yokumaketha engabambisene nayo ingaba yindlela enhle kakhulu kulabo abafuna ama-backlink aphezulu e-PR athengiswayo. Kodwa-ke, phawula ukuthi i-Fiverr izokuletha inqubekela phambili elinganisiwe ku-SEO kuphela uma isetshenziswe ngokucophelela. Ngisho ukuthi kunezindlela eziningi eziningi ezizenzekelayo ezitholakalayo lapho, ngakho-ke akufanele nanini niphumelele ukuthola izixhumanisi eziningi ngangokunokwenzeka. Khumbula ukuthi ukuzuza okusheshayo okusheshayo ekusakhiweni kwesixhumanisi kuzohlale kubonakala kusolisayo emehlweni e-Google.
Ama-backlink Hub - iyindlela yokugcina engiyethembayo yokuncoma ukuzama ukuthenga ama-backlink aphezulu we-SEO. Phakathi kwezinhlangothi zayo ezinamandla kunesiqiniseko sonyaka esizayo nge-backlink ngayinye ethengwe ku-Backlink Hub. Futhi lo mthombo kubonakala sengathi ukubheja okuningi ngekhwalithi kunokuba kungabi khona. Noma kunjalo, amathegi wamanani avamile ngaphandle angase abonakale ehloniphekile.